I-Thymus ilungu elingabonakaliyo. Khangela ukuba yiyiphi indima edlala kuyo emzimbeni womntu. Umncinci, ungaphenduliyo kwilungu lokuqala lokujonga - i-thymus - inxalenye yenkqubo ekhuselekileyo yomzimba wethu. Ngenxa yobukhulu becala kunye nokuvuswa kwangaphambili, i-thymus ikhunjulwe, kwaye ingabi naso ixesha lokuziqonda ngokwenene. Kodwa i-thymus, njengomongikazi onenkathalo, ikhula kwaye iqeqeshe abaphambili-abakhuseli bomzimba womzimba: i-lymphocytes. I-thymus ephakamileyo kwiintsana iyinqaku le nqaku.
Usana olusana luzalwa lusebenza kakuhle. Kuthatha ixesha lokuba zonke iinkqubo kunye namaqumrhu ayo enze kwaye aqale ukusebenza "ngendlela endala." Nangona kunjalo, imivumba ye-thymus ukusuka kwiintsuku zokuqala zobomi ikulungele ukwenza imisebenzi yayo ngokukhawuleza. Ubomi be-thymus bufutshane. Umsebenzi ophezulu obonakalisa ngawo kwiminyaka yokuqala ye-3-5. Emva kokukhonza, eli lilungu liyaqhubeka nokuguqula ukuphuhlisa, okanye i-involution. Ngoko, xa uneminyaka engama-20, isiqingatha se-thymus sithatyathwa yinyama enamafutha, kwaye ngowama-50 isifo se-thymus emzimbeni sigqityiwe. I-Thymus ayilula ukuyibona. Itholakala emva kwesifuba. Imida yale nqanaba ingaqwalaselwa kuphela ebuntwaneni usebenzisa i-X-ray okanye i-ultrasound.
I-Thymus, okanye thymus gland iyilungu eliphambili le-immune system. Inendima yalo kukumisela umkhosi wabasemagunyeni onokukhusela umzimba kwiintsholongwane ngaphandle kokulimaza izakhiwo zawo. Ingxenye ye-lymphocytes (iiseli zegazi ezimhlophe) ibizwa ngokuba yi-T-lymphocytes ngesizathu esihle: ezo zibizwa ngokuba yi-lymphocytes eziye zaqeqeshwa kwi-thymus. Kanye egazini, la maseli akwazi ukwahlula iprotheni engaphandle (i-pathogen) kwaye uqala ukulwa nayo, oko kukuthi, ngenxa yomsitho wakho, ukhuseleko luyakheka. Inyaniso yokuba kunzima kubantu abadala ukunyamezela ukusulelwa komntwana kubantwana (imasel, rubella, inkukhu, njl.) Ngenxa yokungabikho kwendima yoqeqesho kwi-thymus kwixesha elihloniphekileyo.
Xa bethetha nge-thymus
Njengomthetho, umama ufunda malunga nobukho bale nxalenye ngengozi. Ngokomzekelo, i-X-ray, eyenziwe kwezinye izibonakaliso, ngokukhawuleza ibonisa ukuba imida ye-thymus ingaphezulu kwesiqhelo. Yintoni umama angayenza? Okokuqala, kuyimfuneko ukuthetha nodokotela wezilwanyana malunga ne-thymomegaly. Kukho inguqu enyukayo encinane kwi-thymus yabantwana ibonwa njengesiqhelo. Ukwanda kwexeshana kwi-thymus gland kunokukhokelela kwiintsholongwane ezibangelwa yi-viral infections (kwakungekho umntwana osanda kuguga?). Izifo ezithatyathwa ngumama ngexesha lokukhulelwa zivame ukucaphukisa i-thymomegaly. Xa kunemibuzo engqubuzanayo malunga nemeko ye-thymus gland, qhagamshelana ne-immunologist. Emva kokuvavanya umntwana, ukuba kukho izikhalazo zokungasebenzi kakubi kwi-thymus, ugqirha uya kubeka uviwo lokulandelelana: ukuhlolwa kwegazi nge-immunological.
Ingaba kubanda kunye neentsholongwane zihlala zixosha amaqhekeza? Isizathu sivame ukufihlwa ngokuphulwa komsebenzi wokuzikhusela. Kwaye inkohlakalo ngokuthe ngqo ingaba yi-thymus. Ngokomzekelo, i-thymomegaly ayikho nje iqabane, kodwa kwakhona uphawu oluphambili lwe-lymphatic-hyperplastic diathesis. I-diathesis enjalo ayiyiyo isifo, kodwa ingqamaniso yesakhiwo somntwana, umgaqo-siseko. Ngaloo nto, kunokuthi kuqaphele ukuba abantwana abakhulu, abaneenkcenkceshe eziphantsi kwamathambo kunye neenwele ezimhlophe, bahlala begula nge-SARS. Ezi zifo ezincinci ze-lupus zandisa i-lymph nodes nangona kungekho zifo. Kule meko, umntu unokukrokrela ukwanda kwe-thymus.
Sivame ukunyamekela iimvumba. Nangona kunjalo, ukuba uqaphele ukuba akunakwenzeka ukujamelana nokubanda okanye ukungabikho komzimba, qiniseka ukuba udibane nodokotela wezingane.
Yintoni umama angayenza?
Ingqungquthela ene-thymus eyandisiweyo ayifuni nje ukulawulwa kwonyango kunye nonyango - umama kufuneka enze iimeko ezithile kuye. Kulula! Gcina ulawulo lwaloo mini: umntwana kufuneka afumane ukulala ngokwaneleyo. Gweba oonxibelelwano abangenasidingo, ingakumbi ngexesha le-ARVI. Qiniseka ukuba uhamba kangangeentsuku ngosuku. Landela ukutya komntwana. Ukutya kufuneka kube ne-vitaminised, kodwa ngaphandle kokutya okungadingekile. Musa ukuvelisa iimveliso ze-sausage, iilekese, iimveliso ezigqityiweyo. Kuya kuba kuhle kakhulu ukuba uthatha uxanduva kunye neenkqubo zokucotha. Ngaphambi kokukhululwa, gxiba i-membrane ye-mucous ye-sps oksolinovuyu ointment. Musa ukusebenzisa amayeza akho kwizinga lokukhusela! Ukukhokelwa kuphela ngokuqeshwa komgqirha.
Isondlo esifanelekileyo somntwana unyaka
Indlela yokufaka izimonyo: iingcebiso zokusebenzisa izimonyo
I-Turkey - yinto ehlwabisayo, enempilo, inyama yokutya
Iimpawu eziphambili ze-romantic comedies zango-2014: uluhlu kunye neziqephu zefilimu
Jam kusuka kwi roses
Ubusi njengendlela yokulungisa isilulul
Ukulungiswa kwamacwecwe kunye namacwecwe